Soo Iibso Qalabka Karinta Jikada ee Isku-Daabashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Leh - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta WoopShop®
Maqaarka Maqaarka Maqaarka Maqaarka Maqaarka Meelaha Calaashka Cunniga Cuntada
$ 11.64 qiimaha joogtada ah $ 14.94
Maqaarka Maqaarka Maqaarka Maqaarka Maqaarka Meelaha Calaashka Cunniga Cuntada gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca: Colanders & Jilibyada
feature: Daacadnimo, Loo Qiimeeyay
Number Model: bakhaarka jikada
Nooca: Rinjiga Wejiga isku-laabma
isticmaalka: Fry Chef Basket Magic Sixir Dambiil
function: Qalabka Karinta karinta Basket Strainer Net
Isticmaal: Qalabka Cuntada Faransiiska ee Fariis ee shiilan
feature: Kaaliyaha jikada oo dabacsan dabacsan
Waxay si dhakhso leh u caawin kartaa jikada jikada oo fudud.
Waxay ka bilaabataa meel siman oo isla markaaba waxay ku fidaysaa dambiil dabacsan oo kuu oggolaanaya inaad kariso, karinto, ama cuntada shiil qoto dheer oo sahlan.
Gacmaha si gaar ah loogu talagalay ayaa qabow qabow ahaan taabashada.
Marka karinta la dhammeeyo, si fudud kor u qaad dambiisha qafiska oo ka kac dheriga ilaa saxanka.
Waad ku maydh kartaa cuntada weelka cuntada lagu kariyo, gacanta kor u qaad korkeeda isla markaana toos uga tag saxanka jikada ilaa dusheeda hal dhaqaaq oo fudud.
Waxay u laabanaysaa guri siman si loogu kaydiyo meelkasta.
Waxyaabaha: Qalabka birta aan xad lahayn.
Cabbirka: 23cm x 23cm x 14cm
Cabbirka gacanta: 16.5cm x 12.5cm
Xadhiga Xarkaal Xadhiga Xaraashka ah